Rehefa manomboka manao fanatanjahan-tena ny olona iray, dia manomana sy mametraka tanjona sasantsasany. Ny sasany te hampihena lanja, ny hafa hahazo hozatra, ny sasany noho ny antony ara-pahasalamana fotsiny ary ny ankamaroany dia mitady izany famaritana hozatra.
Na izany aza, tsy mora ny manana vatana hypertrophied, toy ny muses sy muses ara-batana izay misy any. Mba hanaovana izany, dia mila fanoloran-tena be dia be, mavesatra, fiofanana mahery vaika, sakafo ara-dalàna, ankoatra ny fampiasana fanafody manokana.
Amin'ireto lohahevitra manaraka ireto dia ho azonao ny fomba fiasan'ny famaritana hozatra sy ny fomba hahatongavana amin'ny vatana hozatra sy hypertrophied nandrasana hatry ny ela. Zahao hoe!
Famaritana ny hozatra: Ahoana no mitranga?
Ny famaritana hozatra dia tsy mitranga, izany no vokatra, vokatry ny fomba fiaina. Noho izany, raha mieritreritra ny hanana vatana voafaritra ianao dia mila manova ny fahazaranao ary mametraka tanjona hotratrarina.
Ny famaritana dia tsy hitranga raha tsy manao fanazaran-tena tsara ianao, amin'ny fomba mety, mihinana izay tokony hohanina ary mandray ny fanampin-tsakafo tsara indrindra ho an'io tanjona manokana io.
Noho izany, ny tsara indrindra dia manana matihanina eo anilanao ianao hanampy anao hahatratra ny famaritana hozatra. Nutritionists, mpampiofana manokana, endocrinologist, gastroenterologist, ireo manam-pahaizana rehetra ireo dia tena zava-dehibe ho an'ny hypertrophy ho zava-misy.
Miaraka amin'ny fanatanjahan-tena mety, ny sakafo ara-dalàna, ny fahazarana ara-pahasalamana amin'ny ankapobeny, ary ny fatra tsara amin'ny fanampin-tsakafo hypertrophy, dia hahatratra ny vatana nofinofy ianao.
Ny sakafo hypertrophy dia tena ambany amin'ny gliosida sy tavy, saika tsy mihinana na inona na inona izay manana ireo singa roa ireo ho lehibe indrindra ianao. Ankoatra izany, dia manankarena proteinina sy fibre.
Izany dia satria ny proteinina sy ny fibre dia hahatonga ny hozatrao ho voafaritra kokoa, ankoatra ny fanampiana amin'ny fanesorana ny gliosida sy ny tavy.
Misy ny olona manao sakafo mifantoka tanteraka amin'ny proteinina mandritra ny roa na telo volana. Mampidi-doza izany satria mety hanimba ny fahasalamanao.
Noho izany, ny tsara indrindra dia ny manatona ireo matihanina mba hahafahan'izy ireo manamboatra sakafo mifanaraka amin'ny tanjonao. Na izany aza, azo atao ny milaza fa saika proteinina sy fibre ary saika tsy misy gliosida sy tavy isan-karazany.
Ankoatra izany, tena ilaina koa ny fanjifana rano be loatra. Ary koa ny fialana tanteraka amin'ny alikaola.
Ny famaritana lehilahy dia fifangaroan'ny sakafo tsara, fanampin-tsakafo, fanatanjahan-tena ary hormonina. Ny tombony ananan'ny lehilahy amin'ny vehivavy amin'io lafiny io dia ny hormonina.
Ny lehilahy dia manana testosterone sy hormones hafa izay manampy amin'ny fitomboana, ny fivoarana ary ny famaritana ny hozatra. Ny vehivavy aza dia manana ireo hormones ireo ihany koa, saingy amin'ny fatrany kely kokoa, izay manasarotra azy ireo ho tonga hypertrophy.
Mba hahatonga ny vehivavy hanana vatana voafaritra, dia mila mampiasa vola amin'ny fomba fiaina mety amin'ny famaritana hozatra ihany koa izy ireo. Na izany aza, noho ny olana momba ny hormonina dia mbola mila fanampin-tsakafo bebe kokoa sy fanazaran-tena henjana kokoa izy ireo mba hahazoana hypertrophy amin'ny fotoana antonony.
Inona avy ireo fanampin-tsakafo tsara indrindra?
Ny fanampin-tsakafo tsara indrindra ho an'ireo izay mitady famaritana hozatra dia tavy, kôbhydrate ary cortisol blockers; ny thermogenics malaza; L-Carnitine sy CLA mba hanafoanana ny tavy faobe ary mamela afa-tsy ny mahia.
Rehefa tonga amin'io ambaratonga io ianao dia mila mahazo hozatra bebe kokoa, satria ho very ny ampahany amin'ny vatanao. Dia raiso fotsiny ireo proteinina malaza, BCAA, leucine, Whey Proteinina, creatine, albumin, glutamine, raha fintinina, ireo vokatra rehetra ireo izay manampy amin'ny fitomboan'ny hozatra.
famaritana hozatra x tombony faobe
Ny tanjon'ny ankamaroan'ny atleta, na mpilalao na tsia, dia ny hanatratra ireo zavatra roa ireo. Na izany aza, tsy mitambatra izy ireo, tsy maintsy manao azy tsirairay avy. Ny baiko dia miankina aminao sy ny karazana vatanao.
Amin'ny ankapobeny, ny atleta manify dia mahazo faobe aloha, avy eo manafoana sy manatratra ny famaritana hozatra.
Ireo manana tavy dia aleony very ny zava-drehetra aloha, hamaritana ny vatana ary avy eo dia mampiasa fanampin-tsakafo ary manova ny fanazaran-tena mba hahazoana matavy kokoa sy hitoetra ho matanjaka ihany koa.
Inona no misakana?
Ny tena manakana ny olona iray tsy hahatratra ny famaritana hozatra dia ny tsy fahampian'ny fifantohana sy ny tanjona. Rehefa manana sakafo, lisitry ny fanatanjahan-tena, ny fanampin-tsakafo napetraka miaraka amin'ny fandaharam-potoana sy ny habetsahan'ny isan'andro dia tsy mety diso ianao.
Mila fotoana izany, mazava ho azy, fa rehefa afaka volana vitsivitsy dia hanana ny vatanao araka izay nirinao foana ianao. Ny olana dia ny ankamaroan'ny olona dia tsy manaja ny sakafo, tsy manao gym, tsy mihinana fanampin-tsakafo tsara. Tena tsy misy lalana mankany.
Raha tianao ity lahatsoratra momba ny famaritana hozatra ity dia zarao amin'ny namanao sy ny namanao amin'ny atleta amin'ny media sosialy!
Tags:famaritana hozatramampihenatombony betsaka